Maxay ka billaabatay silsiladdii guba? – dhugasho
haddisabdi Seteembar 24, 2018 sheekooyin
Maxay ka billaabatay silsiladdii guba?
Cambaro-sagal Bulxan Cali ayaa u doonnanayd Aadan Xuseen Axmed. Aadan wuxuu xurmo iyo yarad ahaan u bixiyey boqol neef oo ishkin ah oo iskugu jira (60 geela iyo 40 lo’ ah.) Kolkii maalkii yaradka ahaa la isdhaafsaday ayuu Bulxan oo gabadha aabaheed ahaa wuxuu Aadan u soo jeediyey odhaahdan. Wuxuu yidhi: “xarago nin weyn ayaad bixisay, xilkiina aniga ayuu igu wareegay laakiin waxaan codsanayaa lix faras inaad soo raaciso maalka aad dhiibtay.” Aadan kama labalabayn maxaa yeelay xoolo uu xididkii ku qurxiyo iyo kuwa uu ku xaajogutaba Illaah waa u dhiibay. Cadceedu intaysan baalka dhiginba wuxuu keenay lix faras oo uu Bulxan guddoonsiiyey. Fardihii markuu guddoomay ayuu Bulxan wuxuu mar labaad yidhi “xoolo dambe oo aan kaa sugayaa ma jiraan. Reerku bari ayuu u dabjeedaa sebankan, markii aan degno meherkii gabadha iyo aqalkii oo dhisan u imow.” Hawraarsan ayuu Aadana ku jawaabay. Aadan habeenkaa ayuu u hoyday raaskii Bulxan, subixii dambena wuu kalaha-guuray.